बुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य !
बुधबार जन्मनेहरु कति भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ बुधबार जन्मनेहरुको स्वभाव र भविष्य !
हरेकको जन्म बार र समयबाट जन्मकुण्डली बनाउने वा भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ ।विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरुको भविष्य र आचरणको विषयमा जानकारी दिन जाँदै छौँ।
बुधबार जन्म भएका व्यक्तिहरु धर्म कर्ममा साथै आफ्नो काममा निकै चासो दिने भएकाले प्रशस्त धन सम्पति संचित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन। बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन, अध्यापन, र राजनीतिको क्षेत्र राम्रो मानिन्छ । यिनीहरुले यस क्षेत्रबाट सजिलै आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छन।
यस दिन जन्म भएका मानिसहरु धार्मिक कामहरुमा बढी रुचि राख्ने गर्छन। त्यसैले भगवानको कृपा उनीहरु जीवनभर सुखी र खुशी रहन सक्छन। यस दिन जन्मिएका महिलाहरुले आफ्नो प्रेमी वा श्रीमानबाट भरपूर माया पाउन सक्छन। यिनीहरु महिलाहरु निकै नरम र भलादमी स्वभावका हुने गर्छन हुने गर्छ जसकारण अन्य व्यक्तिहरुको सजिलै मन जित्ने सक्छन भने विश्वासको पात्र रहने गर्छन।
‘एक भिलेन’ मा अर्जुन कपूरको इन्ट्री, जोन अब्राहमसँग लिनेछन् टक्कर
पुरुषले यी ४ कुराहरु कसैलाई पनि भन्नुहुदैन – जान्नुहोस
साेमबारे औंशीबाट व्रत प्रार,म्भ : श्रावण महिनामा नयाँ व्रत बस्नेहरुका लागि अत्य’न्तै शुभ संयाे’ग
अ’र्का’को “प’ति’स’ङ्ग रा’त बि’ता’ए’प’छी ….हे’र्नुस् यी महिला’लाई यसरी नि’बस्त्र ब;नाएर कु’टि;यो( भिडियो )
गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन